Fitsapana maimaim-poana azo henoina 2020 - Andro 30 voalohany ho an'iza - Tolotra
Ahoana ny fomba ahazoana fanandramana maimaim-poana mandritra ny 30 andro?
Audible dia sehatra an-tserasera lehibe ho an'ireo mpampiasa tia boky. Betsaka amintsika no tsy manana angovo hamaky lalandava. Audible dia miezaka manome anao sehatra hihainoana boky. Ny serivisy audiobook no serivisy tsara indrindra ho an'ireo olona miezaka hahazo fahalalana. Izy io dia vokatra Amazon izay mahomby ary manana tranomboky lehibe. Orinasa midadasika izay lasa malaza tsikelikely ny fialamboly am-peo.
Ny fijerin'ny tanora dia mihena haingana. Tena tsara ny manana safidy hisafidy audiobook. Ankehitriny, miaraka amin'ny Audible, ny fahafahan'ny fialamboly tsy misy farany. Amin'ity toro-lalana ity dia hijery ny fomba hankafizana ilay fitsapana maimaim-poana azo henoina isika.
Fomba ahazoana fitsapana maimaim-poana - 30 andro voalohany
Na iza na iza dia afaka misoratra anarana amin'ny fitsarana maimaim-poana. Any amin'ny faritra vitsivitsy ihany no misy ireo serivisy ireo. Ho an'ity fampianarana ity dia mampiasa ny tranokala Audible USA izahay. Io no toerana mety indrindra hanandramanao ny serivisy Audiobook. Ireto ny dingana hisoratra anarana amin'ny fitsarana maimaim-poana.
Amin'ny maha mpampiasa vaovao anao dia mila mitsidika ny tranonkala ofisialy Audible ianao. Azonao atao ny manindry ity rohy manaraka ity - https://www.audible.com/ . Hahatonga anao any amin'ny pejin-tranon'izy ireo izany. Eto ianao dia afaka manindry ny bokotra tsindrio Click to Try Audible. Toerana mahafinaritra ho anao ny mankafy audiobooks mahavariana.
Hamindra anao mankany amin'ny pejy fidirana Amazon ny tranokala. Satria i Audible dia serivisy Amazon izao, manana kaonty iray ianao amin'ny zava-drehetra. Ny ankamaroan'ny olona dia efa manana kaonty Amazon. Azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo mari-pahaizana ireo eto. Ireo mpampiasa izay tsy manana dia afaka mamorona kaonty vaovao mora foana. Mila tsindrio ny bokotra fananganana kaonty vaovao hanombohana amin'ny fizotrany.
Mila manampy ny antsipirian'ny fandoavam-bolany ireo mpampiasa hanombohana ny fitsarana maimaim-poana. Azonao atao ny manampy ny antsipiriany momba ny carte de crédit na ny fampahalalana Paypal eto. Mpampiasa maro no manana ny antontan-taratasiny efa azo antoka miaraka amin'ny endri-tahiry Amazon. Ny fitsarana maimaimpoana dia tsy hampihena ny vola avy amin'ny loharano fandoavam-bola. Izy io dia hiaro ny antsipiriany rehetra anao amin'ny fandoavam-bola miverina amin'ny ho avy. Tsindrio ny bokotra fanandramana maimaim-poana hanombohana handinihana.
Dia izay! Manana ny tranomboky Audiobook lehibe indrindra misy ianao. Afaka manomboka mihaino ny mpanoratra tiany ny mpampiasa raha vantany vao manomboka ny fitsarana.
Inona no azonao amin'ny fitsapana maimaim-poana?
Misy be dia be ny fampiasana tsara azonao atao amin'ny fitsapana maimaimpoana. Ireto misy zavatra manamarika kokoa tokony ho fantatrao.
Ny fitsarana dia misy mandritra ny 30 andro. Ny fidirana ho mpikambana dia manome anao fidirana amin'ny Audiobook mahazatra iray maimaim-poana avy amin'ny tranombokiny.
Azonao atao koa ny mankafy ny Audiobooks tany am-boalohany. Tsy misy fetrany raha ny momba ny Audible original. Sehatra mahafinaritra izy io hampitomboana ny fahalalanao sy hahazo fialamboly. Iza no mahalala ny fihainoana boky dia mety ho mahafinaritra toy izao.
Tsy misy fanoloran-tena raha ny amin'ny fitsarana maimaim-poana. Amazon dia mamela anao hanafoana ny famandrihana amin'ny fotoana rehetra. Iray amin'ireo fampiasana tsy hay hadinoina indrindra izay atolotray ity fitsarana maimaimpoana ity. Mahazo fampahatsiahivana mandritra ny fito andro aza ianao alohan'ny hifaranan'ny fitsarana. Manome anao ny fotoana rehetra hanafoanana ny famandrihana amin'ny tanana. Azonao atao ny manangona vola vitsivitsy amin'ity hack mora ity.
Betsaka ireo programa momba ny fahasalamana manokana azo alaina miaraka amin'ny Audible. Izy io dia mety amin'ny olona manao gym na yoga. Azonao atao ny mitondra ny torolàlana momba ny fahasalamana mamelombelona rehefa manome tony ny vatanao. Manampy anao hifantoka amin'ny fampihetseham-batana izany ary hahazo valiny bebe kokoa.
Raha Mpianatra ianao dia afaka misoratra anarana Fihenam-bidy ho an'ny mpianatra drafitra.
Ireto ny sasany amin'ireo tombony voalohany amin'ny fampiasana ny sehatra Audible. Ny mpamaky antsika rehetra dia tsy maintsy efa mieritreritra ny hisoratra anarana amin'ny fitsarana malalaka.
Endri-javatra azo henoina:
Ny serivisy Audible dia misy fiasa miavaka maro. Amin'ity fizarana ity dia jerena ny fomba hahazoanao tombony amin'ny famandrihana azy.
1. Mihainoa na aiza na aiza
Amazon no orinasa teknolojia lehibe indrindra manerantany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo dimy lehibe. Tsy vazivazy eny amin'ny tsena ny tolotr'izy ireo. Ny sehatra Audible dia efa misy manerana ny fitaovana rehetra.Azonao atao ny misintona sy mametraka ny fampiharana amin'ny findainao finday sy ny takelaka. Azo ampiasaina ho an'ny iOS sy ny mpampiasa Android izy io.
Ny ampahany tsara indrindra dia ny zava-drehetra eo ambanin'ny fampifanarahana tsy tapaka. Tsy mila manahy momba ny tsoratadidy audio virtoaly ianao. Afaka misafidy tsara ny toerana nijanonany ireo mpampiasa. Izy io dia miasa na dia miova amin'ny fitaovana hafa aza ianao. Seho iray minitra ity izay mitondra fanamorana fidirana amin'ny mpanjifa.
2. Tranomboky lehibe
Amazon no fivarotana lehibe indrindra amin'ny Internet. Tsy mahagaga raha Audible no katalaogy audiobook be dia be indrindra eran'izao tontolo izao ankehitriny.
Manana laharana kilasika sy famoahana vaovao izy ireo. Azonao atao ny mahita ny kinova audiobook saika ny lohanteny misy amin'ny Internet. Io no toerana mety indrindra ho an'ny olona izay tsy mahita angovo hamaky. Azonao atao izao ny mipoitra ao amin'ny sofinao mba hihainoana ny zava-bita. Fanampiny lehibe iray hafa koa ny Audible dia manana am-boalohany maro. Ny filaharana dia mety indrindra ho an'izay te-hihaino tantara mahatalanjona. Ny sasany amin'ireo loharano mahafinaritra dia ahitana ny The Sandman, The autobiography of Malcolm X, ary maro hafa.
3. Mora hita
Ny fitambarana boky virtoaly dia manamora ny fitadiavana safidy tsara indrindra ho anao. Ankehitriny tsy mila mandeha any amin'ny tranomboky ianao raha te hahita boky. Tsy ilaina ny mandany ora maro hitadiavana ny boky iray ilainao amin'ny talantalana. Audible dia manana rafitra sokajy an-tserasera izay manampy amin'ny famolavolana haingana ireo audiobooks. Manamora ny fizotry ny fikarohana ho an'ny mpamaky izany. Misy bara fitadiavana raha te hihaino zavatra manokana ianao. Misy sokajy 15+ boky misy eo amin'ny lampihazo. Audible koa dia mamoaka lisitra amin'ireo boky mafana indrindra isam-bolana.
Betsaka ny mety ho an'ny Audible ary zavatra maro azonao zahana.
Azo henoina - vidiny
Ny vidin'ny Audible dia miovaova amin'ny faritra rehetra. Miankina amin'ny firenena ividiananao ny famandrihana. Amin'ny faritra sasany, Audible dia efa manana fisehoana mendrika. Etazonia dia iray amin'ireo firenena ireo. Ny vidin'ny serivisy dia avo lenta raha oharina amin'ireo faritra toa an'i India. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny Audible dia $ 14,99 / mo ho an'ny mpampiasa rehetra any Etazonia.
Ny fitsapana maimaim-poana azo henoina dia tsy maintsy ho an'ny olona mbola tsy namaky mihitsy. Manome anao fomba hafa ahafahana mankafy boky. Ny olona mankafy mamaky nefa tsy mahita fotoana dia ho tian'ny serivisy omeny koa. Manantena izahay fa ity torolàlana ity dia hanampy anao amin'ny antsipiriany rehetra momba ny Audible. Afaka mankafy audiobooks maimaimpoana iray volana ianao izao.
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Hulu?
10 Alternatives iTunes tsara indrindra
High School Dxd Season 5 : Nohamafisina ny datin'ny famoahana farany!
Araka ny tatitra, ny Star Wars Leak dia nanambara ny datin'ny famoahana ny Bad Batch Season 2.
WEREWOVLES ANY | Tetika | Cast | Bebe kokoa
Ny 200 Halla Ho ve dia mifototra amin'ny tantara marina?
Ny momba ny Summer of Soul rehetra
Dia lavitra mankany amin'ny fiafarana tsy azo antoka – Izay rehetra fantatsika hatreto
Nosy maty 2: Daty famoahana: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
Inona no atao hoe Tyler Perry Net Worth?
The Last Kingdom Season 5: Daty Famotsorana: Netflix, Fanavaozana, Cast, Spoilers ary Izay rehetra tokony ho fantatrao!
Niverina an-dalana i Flack miaraka amin'ny vanim-potoana 2: vanim-potoana Flack 2
Kenny Chesney's Hear & Now Tour dia hampiditra daty fanampiny 20 amin'ny 2022.
Tsy nilalao enina minitra i Patrick De Paula an'i Palmeras rehefa notsatohana antsy teo amin'ny hazo rofia
inona no safidy tsara indrindra amin'ny tariby?
mijery sarimihetsika HD streaming maimaim-poana
mamorona kaonty ho an'ny netflix
tranokala mivantana mivantana mivantana mivantana
fantsom-pitsarana maimaim-poana amin'ny sling tv